Ukubonisana - ITS Tech School
Ababonisi bokuphepha bezisebenzi kungaba yisixazululo sokungabi nolwazi olwanele kanye nobuchwepheshe bokusingatha ukuhlaselwa kwe-cyber zakamuva, izinsongo, nokukhubazeka. Singakwazi ukuhlinzeka ngamakhono amaningi - kusuka ekuhlolweni kokungena ekuqondisweni kokulawulwa nokulinganisa, ekungeneni.
Ukubonisana kwe-ERP ku-cellent kusho amaphrojekthi aphumelelayo, ukwaneliseka kwamakhasimende anamandla kanye nezixazululo ezintsha, njengomlingani ohlala isikhathi eside we-SAP, sinikeza amakhasimende ethu iseluleko esiphezulu kusuka ekuboneni kwebhizinisi kanye nezobuchwepheshe bokubuka.
Ingabe Ukulungele ukuthola Amasevisi Wokubonisana Ne-Security & ERP?
Ochwepheshe bethu beza ukusiza!
Sibheka usongo nokuhlaselwa, ukuphatha izingodo, ukubika isigameko nokuphenya, ukuphatha izimpahla zokuphepha kanye nokuphathwa kwezinhlekelele njengamasevisi.
Ingozi nokuhambisana, ukuhlaziywa kwe-Forensic, ukuhlolwa kwe-GDPR nokuhlaziya, ukuhlolwa kokungena nokukhwabanisa kokuziphatha, ukuqonda inqubo nokusiza ukufeza ngendlela evikelekile.
Qonda ubuchwepheshe bokusingathwa, impendulo futhi uhlanganise nenqubo entsha kanye nesofthiwe. Siyaqonda, sihlele, sidale, sihlanganise, sisebenzise futhi siphume
Ukuqaliswa, ukuqondisa kabusha, ukuhlanganiswa futhi ngemuva kwalokho Ulwazi lokudlulisela ongakwazi ukuphatha izinhlelo zakho ngokwakho ngokusekelwa okuncane okuvela ngaphandle kwezaziso.